ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတာနဲ့ လုပ်လက်စကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ဆက်လုပ်သင့်လား? -
-ကိုဗစ်ရောဂါခံစားပြီးနောက် သက်သာသွားတဲ့သူတွေအနေနဲ့ လုပ်လက်စကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ခနရပ်ထားပြီး အနားယူသင့်တယ်ဆိုတာကို အားလုံးကသိရှိထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ၊ ဒါပေမယ့် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားသူတွေအနေနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကိုအနည်းနဲ့အများ ခံစားရနိုင်တာမို့ လုပ်လက်စရှိတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ခဏရပ်ထားသင့်တယ်ဆိုတာကိုတော့ သိရှိတဲ့သူတွေနည်းနေတာမို့လို့ ယခုဆောင်းပါးလေးကို ရေးသားလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
-ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသူတချို့က ဘာရောဂါလက္ခဏာမှ မခံစားရပေမယ့် တချို့ကတော့ ဖျားခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့နေရာကနေ ကိုက်ခဲခြင်း၊ နုံးခြင်း၊ အဆစ်အမြစ်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေကို ခံစားရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်တွေအနေနဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့သူတွေကို အနားယူတာမျိုး၊ ရေများများသောက်တာမျိုး၊ အာဟာရရှိမယ့်အစားအစာတွေစားတာမျိုးတွေလုပ်ဖို့ အကြံပြုထားပါတယ်။
-ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတာနဲ့ ပုံမှန်လုပ်လက်စ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းဆက်လုပ်လို့ရလား?
ဒီမေးခွန်းက ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်အတွက် မေးသင့်တဲ့
မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့ ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသားသူတွေအနေနဲ့ ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့ ၁ ပတ်လောက်ကို ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေမလုပ်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ များသောအားဖြင့် ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့လူငယ်တွေမှာ ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေ တွေ့ကြုံလာရပါတယ်။ စင်ကာပူနိုင်ငံသား ၁၆နှစ်အရွယ် ယောကျာ်းလေးတစ်ယောက် ပထမအကြိမ် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး(Pfizer)ထိုးပြီးတဲ့နောက် အလေး,မ,လိုက်လို့ နှလုံးရပ်တဲ့ဖြစ်ရပ် ကြုံတွေ့သွားရပါတယ်။
-ဒါဆို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးတဲ့နောက် ဘယ်လိုကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ မလုပ်သင့်ဘူးလဲ?
ရေကူးခြင်း၊ ပြေးခြင်း၊ စက်ဘီးစီးခြင်း စတဲ့ ကိုယ်လက်လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီး တစ်ပတ်ကြာတဲ့အထိ မလုပ်ဆောင်သင့်ပါဘူး။ နောက်ပြီးတော့ ပြင်းထန်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေဖြစ်တဲ့ အလေး,မ,ခြင်း၊ တင်းနစ်ကစားခြင်း၊ ကြက်တောင်ရိုက်ခြင်း၊ ဘက်စကတ်ဘောကစားခြင်း စတာတွေကိုလည်း ရှောင်ပေးရပါမယ်။ တစ်ပတ်ကျော်သွားပြီဆိုရင်တော့လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ ပုံမှန်အိမ်မှုကိစ္စ စတဲ့ ကိုယ်လက်အညောင်းအညာပြေစေမယ့်လှုပ်ရှားမှုတွေ ပြန်ပြီး လုပ်ဆောင််လို့ရပါပြီ။
Oct 27, 2021 Covid 19, Health Tips